Fanondranana “héroïne” any ivelany : Maorisianina iray voasambotra -
AccueilSongandinaFanondranana “héroïne” any ivelany : Maorisianina iray voasambotra
Fanondranana “héroïne” any ivelany : Maorisianina iray voasambotra
05/10/2018 admintriatra Songandina 0
Voapaingotra. Tsy mitsahatra handrenesam-baovao ny fahatrarana teratany malagasy manondrana zava-mahadomelina mahery vaika any ivelany. Tsy lazaina intsony ireo teratany vahiny efa tratra teto amintsika nikasa hanaparitaka izany. Araka ny efa fahita, rehefa tsy sarona eto Madagasikara izy ireny dia any amin’ ny Nosy Maorisy. Teratany Maorisianina 33 taona manambady gasy, ary efa monina an-taonany teto an-drenivohitra indray no tra-tehaka amin’ny resaka fandefasana vovon-drongony mahery vaika any amin’ity Nosy rahavavy ity. Tao amin’ny trano fandraisam-bahiny iray teny Ankadikely Ilafy, ny alarobia lasa teo izy sy ny vehivavy malagasy iray mpiray petsapetsa aminy no nosamborin’ny zandary, taorian’ny fitoriana voaray momba ity raharaha ity.
Araka ny vaovao voaray mantsy dia tovovavy gasy fampiasan’ity Maorisianina iray ity no nahalalana ny asa ratsin’ireto farany. Raha ny fantatra mantsy dia noterena mihitsy ity tovovavy ity hanatitra ny “héroïne” milanja 500 grama any Maorisy. Ny 22 septambra lasa teo no andro voalaza handehaNAn’ity tovovavy ity any ivelany hanatitra izany zava6mahadomelina mahery vaika izany, izay natao tanaty fimailo, ary nafenina tany amin’ny maha vehivavy azy avy eo. Ny loharanom-baovao no nahafantarana fa teo am-piHomanana sy ny fikarakarana ny toerana hipetrahana any an-toerana teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ravehivavy no voatery tsy maintsy najanona. Fantatra tamin’izany fa tsy voafaritra mialoha ny trano hivahinianany mandritry ny fotoana hijanonany any an-toerana. Tsikaritr’ireo tompon’andraikitra tany an-toerana ho hafahafa ity farany tamin’izany, ary avy izy dia nandositra avy hatrany.
Nafenina tao anaty fivaviana
Raha vao nahare izany kosa ny mpitandro filaminana dia tsy nisalasala fa niroso tamin’ny fanakanana sy ny fisavana ny entan’ity mpandeha nampiahiahy ity taorian’izay. Tsy nahitana inona na inona intsony anefa tao anatin’izany, ka tsy maintsy niroso tamin’ny fisavana ny vatan’ity Malagasy ity indray ireo mpitandro filaminana. Tamin’izany no nahatraran’ireto farany, ireo “héroïne”, izay natao tanaty fimailo nafenina tany amin’ny maha vehivavy azy. Notanana nanaovana fanadihadiana avy hatrany moa io teratany malagasy io, ka nandritra izany fakana am-bavany izany no nilazany fa iraka ny tenany, ary izy no sorona nitondra izao zava-mahadomelina mahery vaika izao. Nolazainy ihany koa fa efa nokasain’ity teratany vahiny ity hovonoina ny tenany, ka tsy maintsy nanatitra izany an-tsitrapo na dia tsy nanana trano nivantanana aza. Taorian’izay dia nametraka fitoriana, ary nanomboka teo ny fikarohana ilay Maorisianina mpanao ny asa ratsy. Nohamafisin’ity vehivavy ity, fa mety hanaraka hatramin’ny ainy mihitsy raha tratran’io Maorisianina nanarika azy io izy fa tsy nahavita ny asa. Taorian’izay anefa dia nikaroka hatrany ilay teratany vahiny io, ka nahazoam-baovao indray fa nalainy an-keriny tany amin’ny toeram-piasany mihitsy ravehivavy. Nidina teny an-toerana kosa ny mpitandro filaminana rehefa naharay vaovao, ka tamin’izay no nahavoasambotra ity farany tao amin’ny trano fandraisam-bahiny iray teny Ankadikely Ilafy. Nentina natao fanadihadiana teny amin’ny biraon’ ny zandary teny an-toerana ity olon-dratsy niaraka tamin’ny Malagasy vavy iray voatondro ho mpiara-miasa aminy. Tsy mijanona hatreo ny famotorana mikasika ity raharaha ity, mandra-pahitana ny marina rehetra mahakasika izany, sy ny olona mety handray ny entana. Efa niaiky ny helony, fa atidoha amin’ny fandefasana izao zava-mahadomelina mahery vaika izao any ivelany ireto farany, tamin’ny fanadihadiana. Tsara marihina fa tsy nahitana ambina vovo-drongony tany aminy nandritry ny fisavana azy. Raha tsy misy fiovana kosa dia hatolotra ny fampanoavana anio ireto mpanondrana “héroïne” ireto.
Ny filohan’ny repoblika, Hery Rajaonarimampianina no filohan’ny filankevitry ny mpitsara, na ny CSM araka ny voafaritry ny lalàm-panorenana, izy rahateo no nandray ireo mpikambana vaovao izay vao lany ny faha- 6 ny volana novambra lasa ...Tohiny